Meeting with FB technical team – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
ရေးသားသူ – ထက်ဝေအောင်
တည်းဖြတ် – မရွှန်းမီ
ဂျူလိုင် ၂၂ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀:၃၀ Facebook နဲ့ တွေ့တဲ့ပွဲမှာ auto detect လုပ်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားစာတွေ ကို detect လုပ်မိပြီး ဂဂျောင်တွေပြနေတာ ကို ကိုရာဗီနဲ့ မ Shwun Mi က ပြောသွားပါတယ်။
Facebook and messenger app တွေအတွက် auto convert ကို android အတွက် release လုပ်တာ 50% လောက်ပဲ သူတို့ပေးထားပါတယ်ပြောတယ်။ ဆိုလိုချင်တာ လူတိုင်း account တိုင်း မရသေးဘူးပေါ့။ အဲ့တော့ auto convert မရတဲ့သူတွေ၊ ရအောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော် ရအောင် ပြောပေးကြည့်ပါမယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံခြားကလူတွေ auto convert ရဖို့အတွက် ပြောတော့ ပြည်တွင်းကို ဦးစားပေးနေရလို့ပါတဲ့။ ပြည်ပအတွက် နောက်များကျရင် လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်လို့ ပြောသွားပါတယ် ။ အဲ့တော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ detect လုပ်တဲ့ logic ကို ရေးတဲ့သူက တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ အဲ့လူကလည်း ဒီနေ့ပွဲကို မလာလို့ ဘာမှ ရှင်းမပြနိုင်ပါဘူးတဲ့။
ဖုန်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့မှာရှိတဲ့ ဖုန်းဆိုင် (သူ့တို့ အသင်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ၈၀% သော ဖုန်းဆိုင်) တွေကို auto convert အတွက် updated facebook app တွေထည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကူညီပါ့မယ်တဲ့။
auto convert ရဖို့ကတော့ user ကနေ ဒီ ၄ ချက် နဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ်တဲ့။
1. Device က unicode support ဖြစ်ရပါမယ်။
2. သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ facebook and messenger version နဲ့ အထက် ကို သုံးနေရပါမယ်တဲ့။
3. unicode keyboard ကို အသုံးပြုပြီး post တွေတင် comment တွေပေး။ chat မှာ စကားတွေပြောထားရပါမယ်တဲ့။
4. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိရပါမယ်တဲ့။ (Device ရဲ့ Geolocation ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်)
// နံပါတ် ၄ အချက်ကို သိပ်အဆင်မပြေကြောင်း မ ShwunMi က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ သုံးစွဲသူ အသုံးပြုတဲ့ ဘာသာစကားကို သိဖို့ဆိုတာ Facebook အတွက် ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ //
iOS အတွက် auto convert ကတော့ in progess ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ offically release မလုပ်ရသေးပါဘူးတဲ့။ နောက်လ လောက်မှာ release လုပ်ပါမယ်တဲ့။
ကိုထူးမြင့်နောင် က Pages manager နဲ့ Facebook for workplace နဲ့ workplace chat မှာ auto convert မရတဲ့ အပြင် ဗရုပ်တွေ ပြနေလို့ အဲ့ဒါတွေ လုပ်ပေးပါဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်။
ကိုသီဟအေးကျော် က instant articles တွေမှာ embedded လုပ်တာ တခါတလေ လွဲနေတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်က unicode ကူးပြောင်းရေး ကာလအတွင်းမှာ user တွေ သတိထားနိုင်စေဖို့ push notification အနေနဲ့ reminder ပို့ပေးဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ် (Savage)
ကိုရာဗီက ပန်းစကား လိုမျိုး video ဒါမှမဟုတ် ကာတွန်းပုံတွေနဲ့ awareness ရအောင် ကန်းပိမ် လုပ်ဖို့ အကြံပေးသွားပါတယ်။
Auto convert ကိုလည်း minimum android version 4.4 လောက်က စပြီး ရအောင်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပေမယ့် 5.0 ကတော့ ပိုပြီးသေချာတယ်လို့ ပြီးခါနီး ပြောသွားပါတယ်။
( converter လုပ်တဲ့သူက US ကလူဖြစ်ပြီး မြန်မာစာလည်း မတတ်ပါဘူး။ အာရှ ကိုတောင် အခု meeting မှ ရောက်ဖူးတာပါ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောသွားပါသေးတယ်။ သူ့ခမျာ virtual devices တွေ emulators တွေပေါ်မှာပဲ စမ်းခဲ့ရတယ် ပြောပါတယ်။ converter နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ကို တိုက်ရိုက် ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး သူ့ email ပေးသွားပါသေးတယ်။ )
← Previous Previous post: ယူနီကုဒ်သုံးကြစို့
Next → Next post: မြန်မာယူနီကုဒ် စာလုံးများ -၁
3 thoughts on “Meeting with FB technical team”
How does the FB autoconvert work? Does it autodetect zawgyi input and convert it to Unicode? Does it detect that user’s device does not have Unicode, so the unicode content is translated to zawgyi at rendering time?
September 21, 2019 at 10:22
When you choose to write the article in Myanmar language, please respect your organisation’s motto “ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာသုံးစံနှုန်းများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပါ။”.
September 23, 2019 at 12:42
Yes, we always do, thank you. That’s why we only write in Internationally recognized Myanmar Unicode Standard compliant fonts.